११ विधामा ‘आइसिटी अवार्ड २०२१’ को अनलाइन नोमिनेशन शुरू - प्रबिधी खबर
June 24, 2021 by Prabidhikhabar
सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रको एक प्रतिष्ठित अवार्डको रूपमा स्थापित आइसिटी अवार्डको छैटौं संस्करणको अनलाइन नोमिनेशन (आवेदन) आज (असार ८, २०७८ तदनुसार २२ जुन, २०२१) देखि शुरु भएको छ । लिभिङ विथ आइसिटीको आयोजना र विभिन्न सरकारी तथा निजी संस्थाहरूको सहकार्यमा आयोजना हुने ‘आइसिटी अवार्ड २०२१’ को लागि विभिन्न ११ विधाहरूमा अवार्डको नोमिनेशन खुला गरिएको छ ।
भर्चुअल कार्यक्रममा बोल्दै्र पुर्वमन्त्री गणेश शाहले आइसिटी क्षेत्रलाई अझ फराकिलो बनाउदै लानुपर्ने र यसको लागि अवार्डले सार्थक बनाइरहेको बताए । यसैगरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव अनिल दत्तले आइसिटी अवार्डले नेपालको आइसिटी क्षेत्रलाई प्रवद्धन गरेर बताउदै उनले नीजि तथा सरकारी क्षेत्रको सहकार्यमा डिजिटल नेपालका अभियान सार्थक बनाउनुपर्ने बताए । कार्यक्रममा पूर्व सहसचिव विरेन्द« मिश्र, क्यान महासंघका प्रथम अध्यक्ष बिमल शर्मा, प्रथम पायोनियर आइसिटी अवाडए विजेता मुनी शाक्यलगायतले अवार्डको महत्वको बारेमा बिचार राखेका थिए ।
अवार्ड विजेताहरूले विशिष्ट सम्मानसँगै विभिन्न सेवा र सुविधाहरू प्राप्त गर्नेछन् । विजेताले सहुलियतपूर्ण ऋण सुविधा र लगानीको अवसर समेत प्राप्त गर्नेछन् ।
आइसिटी अवार्ड २०२१ को कुन विधामा कसले दिने आवेदन ?
आइसिटी अवार्ड २०२१ मा नोमिनेशन गर्न आधिकारिक वेबसाइट www.ictaward.org मा गएर रजिस्ट्रेसनमा क्लिक गरी सम्बन्धित विधा (क्याटेगोरी) छनौट गरी आवश्यक अनलाइन फारम बुझाउनुपर्नेछ ।
आइटी प्रडक्ट, सर्भिस तथा इन्नोभेसन क्षेत्रमा काम गरिरहेका कम्पनीहरूलाइ प्रवद्र्धन र प्रोत्साहन गर्ने यो अवार्डमा सहभागी हुन नेपालको प्रचलित कानून अनुसार कम्पनी दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेको हुनुपर्नेछ । यस विधामा विगत ३ वर्षको अवधिमा दर्ता भएका कम्पनीहरूले आवेदन दिन सक्नेछन् । गतवर्र्ष यस विधामा क्रिप्टोजेन नेपाल प्रा.लि विजेता भएको थियो ।
आइसिटी प्रडक्ट अवार्डमा कुनै नेपाली कम्पनी, संस्था, समूह वा व्यक्तिले विकास गरेको आइटी तथा इन्नोभेटिभ प्रडक्टलाई नोमिनेशन दर्ता गराउन सकिनेछ । २०७७ वैशाखदेखि २०७८ चैत मसान्तसम्म सार्वजनिक भएका आइटी प्रडक्टहरूलाई लिएर यस विधामा नोमिनेशन दर्ता गर्न सकिन्छ । गतवर्ष सिपिएफडिएस एएमएल एण्ड केवाइसी म्यानेजमेन्ट सिस्टम विजेता भएको थियो ।
राइजिङ स्टार इन्नोभेसन आइसिटी अवार्डमा कलेज तथा विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरू तथा ३० वर्ष मुनिका युवाले तयार गरेका रिसर्च, इन्नोभेसन तथा प्रोजेक्टहरूलाई लिएर नोमिनेशन दर्ता गर्न सकिनेछ । यस विधामा गतवर्ष सेन्ट जेभियर कलेजका विद्यार्थीको ‘सन्चै छौ’ नामक प्रोजेक्टले अवार्ड प्राप्त गरेको थियो ।
यो अवार्ड सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान दिएका अग्रज व्यक्तिलाइ प्रदान गरिन्छ । गतवर्ष नीलकण्ठ उप्रेती यस अवार्डबाट सम्मानित हुनुभएको थियो ।
नेपाली मूलका व्यक्ति, जो विदेशमा बसेर पनि देशको सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा दिइरहेको योगदानलाई उच्च कदर गर्दै यो अवार्ड दिइनेछ । गतवर्ष अमेजनमा कार्यरत नेपाली गौरवराज उपाध्यायले अवार्ड प्राप्त गर्नुभएको थियो ।
आन्टरप्रेनर आइसिटी अवार्ड सूचना प्रविधि क्षेत्रमा क्रियाशील नेपाली उद्यमीलाई दिइनेछ । गतवर्ष यस विधाबाट भायानेटका प्रबन्ध निर्देशक विनय बोहरा विजेता हुनुभएको थियो ।
वुमन आइकन आइसिटी अवार्ड सूचना प्रविधि क्षेत्रमा क्रियाशील नेपाली महिलाहरूका लागि लक्षित छ । गतवर्ष प्रा. तिमिला यमी थापा यस विधाबाट सम्मानित हुनुभएको थियो ।
डिजिटल एजुकेशन आइसिटी अवार्ड शिक्षा क्षेत्रलाई डिजिटल तथा प्रविधिमैत्री बनाउन प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सरकारी तथा सामुदायिक शैक्षिक संस्थानलाई प्रदान गरिन्छ । गतवर्ष बूढानीलकण्ठ विद्यालयले यस विधाबाट अवार्ड प्राप्त गरेको थियो ।
यस विधामा सरकारी सेवा तथा सुविधालाई डिजिटलिकरण गर्र्दै नागरिकलाई प्रविधिमैत्री सेवा दिन सफल सरकारी सस्था, निकाय, विभाग वा पालिकाहरूले नोमिनेशन दर्ता गर्न सक्नेछन । गतवर्ष आन्तरिक राजस्व विभागले डिजिटल गभर्नेन्स आइसिटी अवार्ड प्राप्त गरेको थियो ।
यसैगरी गतवर्ष कोभिड १९ लाई लक्षित विधा एनसेल इन्नोभेसन ड्रिभन क्राइसिस रेसपोन्स आइसिटी अवार्ड पाइला इमर्जेन्सी रेसुसिएटरले प्राप्त गरेको थियो । जुरी मेन्शन अवार्ड २०२० हाम्रो स्वास्थ्य र मिडिया पर्सन अवार्ड किरण आचार्यले प्राप्त गर्नुभएको थियो ।
ह्वावेव्दारा AR ह्वाइट पेपर र 5G+AR को फाइदा बारे विस्तृत विवरण जारी